यसरी हुन्छ जाडोमा जोडीहरुको मस्ती, अझ यसरी बढाउन सकिन्छ - Dakpi Khabar
जाडोयाममा पार्टनरको निकटताको कुरै बेग्लै हुन्छ । यहाँ केही बुँदा छन्, जसले सवित गर्नेछ कि यौन सम्बन्धका लागि जोडोयाम कति उत्तम छ।
बाहिरको चिसो हावाले पार्टनरलाई अँगालोमा भर्ने उत्तम बाहना हो । चियोयाममा केही यस्ता विशेष हुन्छ जसबाट पुरुषलाई यौन सम्पर्क गर्ने इच्छा बढ्दछ । शायद कपडामा लुकेका महिलाहरुलाई यो मिस्ट्रीजस्तो लाग्छ वा कपडाको लेयरिङले उनीहरुको कल्पनाशीलता बढाइदिन्छ ।
जाडोयाममा बिहानै तातो पानीमा नुहाएसँगै मुड बने कति गज्जब होला । थोरै आफ्नो पार्टनरको आँखामा आएको चमकका बारेमा सोच्नुस् त । चिसोमा तपाई दुई साथ रहेको तातोपन महशुस सहजै गर्न सक्नु हुनेछ ।
जब बाहिर निकै चिसो होस्, तपाईसँग बाहिर जाने विकल्प पनि नहोस् र यस्तोमा तपाईको मुड पनि ठिक छ भने तनाव कम गर्ने सबभन्दा राम्रो बाटो शारीरिक सम्बन्ध नै हो ।
तपाईलाई लाग्छ कि यदि मोजाले तपाईलाई मात्रा न्यायो राख्छ, त्यसो हो भने जानकारी बढाउनुस् । शोधकर्ताहरुका अनुसार जुन जोडीले साक्स लगाएका थिए, उनीहरुमध्ये ८० प्रतिशत उनीहरु चरमोत्कर्षसम्म पुगे जबकि जसले लगाएका थिएनन् उनीहरुमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै यो अनुभव गर्न पाए । कारण? वास्तवमा मोजाले तपाईलाई न्याना मात्र बनाउँदैन, यसबाट ब्लड भैसेल्स चौडा हुन्छ र रक्त प्रवाह तिब्र हुन्छ । नतिजा? उत्तम अर्गज्म ।
चिसोयाममा चकलेट, केक गाजरको हलुवा तपाई बिना डर सेवन गर्न सक्नुहुनेछ । यदि जिम जाने म छैन भने पनि चल्नेछ । किनभने यौन सम्बन्ध तौल कम गर्ने सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ तरिका पनि हो ।
चिसोयाममा रुघाखोकीको गहिरो नाता छ, तर यदि भनौ कि सेभ होइन, सेक्सले डाक्टरसँगको दूरी बढाउन सहयोग गर्छ ? सन् २००४ मा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार यौन सम्बन्धले इम्युनोग्लोबिनको मात्रा बढाउँछ । यसले तपाईको इम्युनिटी बढाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि यौन सम्बन्ध तपाईको स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायी छ । एजेन्सी